उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा ध्यान दिन भक्तपुरका व्यापारिलाई आग्रह – Health Post Nepal
उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा ध्यान दिन भक्तपुरका व्यापारिलाई आग्रह
२०७७ पुष २३ गते १९:२६
योग गर्दा यी कुरामा ध्यान दिनुस्
जान्नुहोस! दही र चिउरा खाँदा स्वास्थ्यमा पुग्छन् यस्ता फाइदा
१६ करोडको इन्जेक्सन कुर्दै आइसियुमा जीवन खोजिरहेकी पाँच महिने तीरा
के ‘सेक्स’ ले तौल बढ्छ?
बबई गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम : प्राथमिकतामा स्वास्थ्य
व्यवसायीका कारण उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा असर नपरोस् भन्नका लागि भक्तपुर नगरपालिकाले बेला-बेलामा बजार अनुगमन गर्ने गरेको छ।
बजार अनुगमनको क्रममा धेरै पसल दर्ता नभएका र केही व्यवसायीले म्याद नाघेका सामान बेच्नेगरेको पाइएको अनुगमनटोलीले जनाएको छ। यसै विषयमा बिहीबार भक्तपुर नगरपालिका क्षेत्रभित्रका पसल व्यवसायीहरूको भेला गरिएको छ।
भक्तपुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख सुनिल प्रजापतिले व्यापार सेवा व्यवसाय भएकाले उपभोक्ताको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा दिएर व्यापार गर्नुपर्ने बताए। व्यवसायीका कारण उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर पर्न सक्ने प्रजापतिले बताए।
एक पटकको गल्तिले उपभोक्ता मात्र समस्यामा नपरी व्यवसाय नै खतरामा पर्न सक्नेतर्फ ध्यानदिन उनले आग्रह गरे। छलफलका क्रममा नगरपालिकाको बजेट नगरबासीकै हितको लागि प्रयोग गर्दै आएको उनले बताएका थिए।
भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर ३ का वडाध्यक्ष एवं बजार अनुगमन समितिका संयोजक राजकृष्ण गोराले समयमै पसल दर्ता गर्नुपर्ने, नगरपालिकामा तिनुपर्ने कर तिर्नुपर्ने तथा सरसफाइमा ध्यान दिएर व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। गोराले साना व्यवसाय फस्टाओस भन्ने चाहना नगरपालिकाको रहेको बताए। उनले साना पसल व्यवसायी एक हुनुपर्नेमा जोड दिए।
त्यस्तै भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर ६ का वडाध्यक्ष एवं बजार अनुगमन समितिका सदस्य हरिराम सुवालले नगरपालिकाले बजार अनुगमन पश्चात पसल–व्यवसायीमा सुधार आएको बताए। अनुगमन पश्चात तिर्नुपर्ने कर सम्बन्धी व्यवसायीमा सकारात्मकता आएको उनले बताए। यसले गर्दा आन्तरिक श्रोत बढाउन मद्दत पुग्ने उनले भनाइ छ।
Tags: उपभोक्ता, स्वास्थ्य